Leave a Comment on DASTUURKA CUSUB EE SOOMAALIYA PDF
Golaha dastuuriga ee Soomaaliya ayaa waxa ay ansixiyeen dastuurka cusub shir hadda ka socda magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo warramay in laba. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. جمهورية الصومال الفيدرالية. Dastuurka Ku-Meel Gaarka. La Ansixiyey August 1, MrHeishu, Soomaaliya . 16 May Muqdisho – Shir saddex maalmood socday oo ku saabsanaa dastuurka cusub ee Soomaaliya ayaa maanta la soo gebagabeeyay iyada oo uu.
Author: Malataur Faegor
Islaamku waa Diinta Dowladda. Qodobka in laga fiirsado u baahan waa 88aad ee shuruudda doorashada madaxweynaha, laakiin inta aan qodobkaas ka hadlin, u fiirso dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: Ajnabi dalka waa ka noqon karaa madaxweyne Qorshe Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo idil, oo ay ku jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka. Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah.
Dastuurka Soomaaliya kiiQod. African Union denies 30 soldiers killed in explosion October 30, Guddoon afri Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda cushb Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Gobannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqaddas laguma-xadgudbaan ah. Waxaa loo dooran karaa jagada Madaweynaha JDS. Turkish prosecutor October 31, Waxaa ay shuruudda ku dareen in uu ka dhashay qabiillada dalka degan, weli in uu Afrikaan asal ah yahay. Sabtidii waxaa la soo xiray kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka federaalka, waxaa la sheegay in la dhameystirayo cutubyada dhiman sida 5, 6, 7, 8 iyo naad, cusbu guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ay aadi doonaan gobollada dalka iyadoo ay ku wehlinayaan xildhibaanada gobolkaas ka soo jeeda si shacabka loogala tashado arrimaha dib u eegista dastuurka kadibna waxaa dastuurka lagu soo celin doonaa baarlamaanka si qodob walba xildhibaan u ansixiyaan.
Most Related LENGUA ENOQUIANA PDF
UN urges Somali leaders to solve political tension October 29, Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa Heesta Qaranka.
Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1. Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Muxammed scwwuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada. Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida ku cad jadwalka. Arrinta ku saabsan shuruudaha qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya ee dastuuradii hore ku qornaa waxaa ay ahaayeen kuwoo aad u adag, waxaan soo qaadneynaa sida ay u kala horeeyaan: Dastuurkan KMG ah ee ka waxaa uu ka duwan yahay dastuuradii hore marka laga hadlayo shuruudaha doorashada Madaxweynaha dalka oo waxaa ku qoran qodobkiisa 88aad: Soomaaliya hadda waxaa ay ku dhaqantaa Dastuur Qabyo ah, soosaarista dastuur cusub rasmi ah ayaa la filayaa ka hor inta aysan dalka ka qabsoomin doorasho qof iyo codkiisa ah sannadka ka.
Qodobka 3aad — Sarraynta Dastuurka 1. Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka. Maxamed Nur Gacal oo ka tirsan aqoonyahanka dalka waxaa uu qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda kale ka jirin, waxaa uu ku taliyay in wax laga bedelo shuruudaha qofka u sharaxan madaxweynaha ee ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira.
Most Related TOPOGRAFIA JACK MCCORMAC PDF
You are here Home. Shirweynihii Dastuurka Qaran, kaasi oo isku keenay in ka badan ergo oo ka kala yimid dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed, ayaa billaabaya hannaan dib u eegis ah oo wax ka qaban doona dhowr arrimood oo dastuuri ah oo aan weli xal loo helin, oo ay ka mid yihiin maqaamka mustaqbalka Muqdisho iyo qaybsiga awoodaha iyo kheeyraadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
US and Turkey drop dueling sanctions against senior officials November 4, Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Somali Islamist group steps up extortion October 30, Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada.
Six people killed near Mogadishu October 30, Xildhibaano kale oo federaalka ah oo aan la hadalnay ayaa cadeeyay in ay sugayaan dastuurka la horkeeno baarlamaanka isla markaana aanay xumaan u arkin in la raaco meeshii loo bato xitaa haddii uu dalka madaxweyne ka noqonayo ruuux labo baasaboor leh. Caasimada Online – November 8, Dalka Masar tusaale ahaa sanadkii kii waxaa doorashada laga reebay Sheekh Xaasim Abuu Ismaaciil, ma aheyn in Sheekh Xaasim uu dhalasho kale heystay laakin waxaa looga reebay markii la ogaaday in hooyadiis ay heshay Green Card mar ay booqasho ugu tagtay gabadheeda oo deganeyd dalka Mareykanka.